စင်္ကာပူအစိုးရထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် NUS-iSSမှာ သင်ကြားလိုသူများ(၂၀၂ဝ)ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ - Crown Education
❑ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း IT ဘွဲ့ရ များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိသူများ အနေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ သင်ကြားရေးစနစ်နဲ့အတူ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် National University of Singapore (NUS) လက်အောက်ရှိ Institute of Systems Science (iSS) မှာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ တက်ရောက်ဖို့ လျှောက်ထားကြပါတယ်…. ပြည်တွင်းရှိ ကွန်ပျူတာ / IT ဘွဲ့ရများ၊ အခြား ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူများသာမက IT နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိထားသူများအနေဖြင့် NUS လို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရမယ့်အပြင် စာသင်ကာလ (၁၂) လ အတွင်း Industrial Attachment (လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ) – (၅) လ ပါဝင်တာကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ စာသင်ရရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံပါ ပူးတွဲရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
❑ Graduate Diploma in Systems Analysis Programမှာ လေ့လာသင်ကြားရမယ့်Moduleတွေနဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲ?
Graduate Diploma in Systems Analysis Programတက်ရောက်ရမယ့် (၁)နှစ်အတွင်း Application Development Life Cycle, Distributed Computing Infrastructure, SQL Programming with consideration of Big Data(Databases), Programming – Java Suite, Programming – Java Suite, Programming – Python Suite, Full stack Solution Development, Internet Application Development, Project Management, Mobile Solution Developmentတွေကို အဓိကထားသင်ကြားရမှာဖြစ်သလို Group Worksနဲ့ Projectတွေကိုအဖွဲ့အလိုက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ကြားမှုအပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့် Industrial Attachment(၅)လကိုလည်းစင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီကြီးများမှာ ဆင်းရမှာဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းပြီးဆုံးသူတွေအနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများစွာ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
❑ NUS-iSSရဲ့ Post Graduate Diploma in Systems Analysis ကို ဘယ်သူတွေလျှောက်ထားနိုင်လဲ?
•ကွန်ပျူတာ / IT ဘွဲ့ရများ (သာမက) အခြား ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူများ
•IT နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိထားသူများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး https://nus.edu/2IfH4K8 မှ တစ်ဆင့်ဝင်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။